ဤတွင်သင့်အိမ်အတွက်ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဦးန့်အသတ်ငွေပမာဏကိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG - "ဤတွင်ကိုမည်သို့သင့်ရဲ့အိမ်မှာကြက်သွန်ဖြူတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်ကြီးထွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းလျာများ၏အရသာတိုးမြှင့်ခိုင်မာတဲ့အနံ့မှပစ္စည်း, ကြက်သွန်ဖြူကိုမသာအချက်အပြုတ်လယ်ကန့်သတ်ဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြွယ်ဝနေသည်။ Anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အစွမ်းထက်ပဋိဇီဝဆေးများနှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာ, လက်ပေါ်မှာရှိမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သင်တို့မူကား, ဖျက်ဆီးဒါမှမဟုတ်စူပါမားကက်မှအဆက်မပြတ်ခရီးစဉ်၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်း, အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးအတွက်တွန်းအားပေးလုပ်နေသငျသညျအိမျတှငျဤအပါဝင်ပစ္စည်းရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်မလို, မစိုးရိမ်ပါ!
စားနပ်ရိက္ခာမီးပြတိုက် ရိုးရာဆေးပညာ, ကြက်သွန်ဖြူအများအပြားကျန်းမာရေးပြဿနာများဆက်ဆံဖို့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်စိုက်ပျိုးပါကနိုင်ငံအများအပြားအဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောထိရောက်မှုများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုတိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်. ဒီပါဝင်ပစ္စည်း "ရုရှား penicillin" သို့မဟုတ် "သဘာဝကပဋိဇီဝဆေး" အပါအဝင်, ရာစုနှစ်မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
ကရှင်းပြသည်အဖြစ် အဆိုပါ Pharmacognosy ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ရှေးဟောငျးအီယဉ်ကျေးမှု typhus, ဝမ်းရောဂါနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါအပါအဝင်များစွာသောရောဂါ, ဆက်ဆံဖို့ကြက်သွန်ဖြူလှည့်ပြီ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် curative ဆေးတစ်လက်ယင်း၏ရိုးရာအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးကနျြးမာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်း၏အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးအပြီးသတ်သောလေ့လာမှုများမှသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆောင်၏သိချင်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်သူတို့ကိုဆနျးစစျကွပါစို့။
တစ်ဦးနှင့်အညီ လေ့လာ ကထုတ်ဝေတဲ့ Phytom ၏ Avicenna ဂျာနယ်Edecine, ကြက်သွန်ဖြူနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအပေါ်တားဆီးပြုမူသည်ဟုအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အများအပြားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေသွေးဖိအားများနှင့်လက်စထရောကိုလျှော့ချအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြအဖြစ်သွေးကြောများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေး, ရှိသမျှနှလုံးကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သွေးတိုးရောဂါနှင့်အတူ 47 လူနာအပေါ်ကောက်ယူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲသိသိသာသာကြောင့်လျှော့ချခြင်း, နှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားအပေါ်ကြက်သွန်ဖြူများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသထားပါပြီ။ ၏အမှန်မှာထိုငြင်းအားသာချက်ကြက်သွန်ဖြူ သေချာပေါက်ရောဂါများဆီသို့ဦးတည်ခြင်းမရှိဘဲအချို့မမှန်ဆက်ဆံဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားနေရပြီးလက်စထရောလူနာတစ်ဦးစမ်းသပ် 38 နှစ်ပေါင်းအသက်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့သွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ 50% ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချစုစုပေါင်းလက်စထရောသွေးရည်ကြည်ဟာသိသိသာသာလျှော့ချရေးစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်တူညီတဲ့နိဂုံးချုပ်မြို့သို့ရောက်လေ၏။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းရန်ကြက်သွန်ဖြူများအသုံးပြုမှုမကြာသေးခင်ကဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်စင်စစ်အသေးအဖှဲဝေဒနာတွေအဘို့ဤဆေးတစ်လက်လည်းဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အသွင်အပြင်မတိုင်မီသက်သေပြခဲ့သည်။ ကရှင်းပြသည်အဖြစ်သိပ္ပံ, ယနေ့အတည်ပြုခဲ့သည် ရောဂါပြီးပညာသုတေသနများ၏ဂျာနယ်, ကြက်သွန်ဖြူ၏ရှုပ်ထွေးသောဇီဝဓါတုဗေဒ (Allium sativum လည်းခေါ်) ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပုံရသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်။ ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစျဆငျ့ cytokinesကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့ Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး, ကြက်သွန်ဖြူအများအပြားကုထုံးအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတိုင်း အရေပြားရောဂါဗေဒ၏ဂျာနယ်, ခေါင်းစဉ်ကြက်သွန်ဖြူအကောင်အထည်ဖော်မှု psoriasis, Alopecia, ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှု, အမာရွတ်နှင့်အိုမင်းအသားအရေနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများအပါအဝင်အရေပြားရောဂါ, များစွာသောလူဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ အမှန်မှာက၎င်း၏အကြောင်းအရာ allicin antibacterial နှင့်အစွမ်းထက် Anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများပေးအပ်။
ထို့အပွငျ လေ့လာ photoaging ပေါ်မှာဤပစ္စည်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသရုပ်ပြရန်အလွန်အလားအလာရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ က compose ရာ caffeic အက်ဆစ်, cysteine ​​နှင့် uracil နှင့်အတူ, သိပ္ပံပညာရှင်များအရေးအကြောင်းတွေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်တစ်ဦးဓါတ်တိုးအရေးယူမှုနဲ့ anti-inflammatory ကြက်သွန်ဖြူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
စိုစွတ်သောနှင့်နက်ရှိုင်းသော, တစ်ဦးချင်းစီသီးတောင့်သို့ကြက်သွန်ဖြူမီးသီးရွေးချယ်ခွဲထား, သူတို့ချောင်မြေဆီလွှာတွင်နက်ရှိုင်းသော5စင်တီမီတာစိုက်ပျိုးကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ချွန်အဆုံးမှထွက်ရင်ဆိုင်နေရသည်အကြောင်းကို 20 ၏အကွာဆိတ်ကွယ်ရာ centimeters ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေရာသတိရပါ။ သူတို့ကိုထို့နောက်အခြောက်ရွက်သို့မဟုတ်ကောက်ရိုးကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာထည့်ပါ။ သင်ကဆြုံး၌သင်တို့၏ကြက်သွန်ဖြူကိုစိုက်ပျိုးလျှင်, ဥပမာ, သင်နွေဦးရာသီ၌ fertilize နိုင်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးစတင်ပြီးတာနဲ့မှန်မှန်သင်၏မြေကိုစိုစေပေမယ့်ပိုလျှံသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်; ကြက်သွန်ဖြူအထူးကြပ်မတ်ရေလောင်းမလိုအပ်ပါဘူး။
ယင်း၏အရသာနှင့်အနံ့ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပန်းပွင့်ပွင့်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သူတို့အဝါရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင်အရွက်5မှ6၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်တိုင်အောင်ဖယ်ရှားလို့မရပါဘူး။
သငျသညျခွဲစိတ်ရှိပါကသင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ anticoagulant အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြက်သွန်ဖြူကိုမစားရန်အကြံပြုပါသည်။ အမျိုးသမီးတွေနို့လည်းသူတို့ရဲ့နို့၏အရသာကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့မရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်
အဆိုပါလောင်းကစားရုံ, play ဖို့အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခွင့်ပြုသောလှည့်ကွက်မှာ